मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरे भोजपुर र उदयपुर जोड्ने पुलको शिलान्यास « Emakalu Online
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरे भोजपुर र उदयपुर जोड्ने पुलको शिलान्यास
भाेजपुर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमत्री शेरधन राईले दुधकोशी नदिमा बन्ने मोटरेबल पुलको शिल्यान्यास गरेका छन। भोजपुर जिल्लालाई तराईसँग जोड्ने उक्त पुल भोजपुर जिल्लाको हतुवागढी गाउँपालिका वडा-९ स्थित चुहारमा निर्माण हुन लागेकाे पुलकाे साेमबार शिलान्यास गरिएको हाे ।
उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने मैनामैनी हुँदै तराईलाई जोड्ने पुलले भोजपुरको आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन बिकास एबम समग्र बिकासमा टेवा पुग्नेछ। प्रमुख अतिथी मुख्यमन्त्री शेरधन राईको रहेको उक्त कार्यक्रममा भोजपुरका प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन किरातको सेमत आतिथ्य रहेको थियो। त्यस्तै भोजपुर र उदयपुरका प्र.जि.अ. हरु पनि उपस्थित रहेका थिए।
टेन्डर प्राप्त गरेका कालिका कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माण कार्य अबको दुई बर्ष भित्रमा सम्पन्न भईसक्ने बताएको छ। शिलान्यास उत्घाटन समारोहमा हतुवागढी गाउपालिका प्रमुख प्रेम कुमार राई , कालिका/प्यासिफिक जे.भि.का आ.प्र. ठाकुर प्रसाद कडेल, पुर्बाधार बिकास कार्यलय भोजपुरका नि.का.प्रमुख ई.राजनराज रेड्डी, पुर्बाधार बिकास कार्यलय उदयपुरका नि.का.प्रमुख ई. जितेन्द्र कुमार कर्ण, LRBSU/SBCO इटहरी प्रमुख ई. मन्केश्वर ठाकुर समेत उपस्थित रहेका थिए ।
स्थानिय स्तरमा हुने बिकास कार्यमा स्थानियहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसकारण यो पुल सफलतापुर्बक सम्पन्न गर्न सबैले चासो र सहयोगी भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुनेछ। आफ्नो गाउ ठाउँको बिकासका लागि सबै तह र तप्कामा ब्यक्तिहरुले सरोकार राखी निर्माण कम्पनीको कामलाई अनुगमन गरी गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नु आवश्यक छ । यो पुल निर्माण भए बिशेषगरी भोजपुरको दक्षिण भेग हतुवाबासीलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्नेछ भने समग्र भोजपुरको सम्रिद्धीका लागि कोशेढुङ्गो साबित हुनेमा छ ।